EM4200 Chip ကဒ်နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့, EM4102 Chip ကဒ်နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့, EM4100 Chip ကဒ်နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့
EM4102 Chip ကဒ်နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့, EM4200 Chip ကဒ်နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့
EM ကဒ် / LF Card ကို EM4100 Chip ကဒ်နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့, EM4102 Chip ကဒ်နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့, EM4200 Chip ကဒ်နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့
၎င်း၏အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်အားသာချက်နှင့်အတူ EM4100 chip ကိုအတူလိုက်ဖက်တဲ့, ကထက်ပိုမိုယူထားသော 80% စျေးကွက်၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း.
မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်: 64နည်းနည်း, သာဖတ်ရန်
လုံခြုံရေး features တွေကို: ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထူးခြားတဲ့နံပါတ်စဉ်
ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ: PVC / PET / ကို ABS,စသည်တို့ကို.
အရွယ်: 85.5× 54mm
အထူ: အထူ ID ကိုကဒ်: 1.8မီလီမီတာ
သဟဇာတ EM4200 ၏တရုတ်ထုတ်လုပ်မှု / EM4102 / EM4100 ချစ်ပ်, နည်းပညာ parameters တွေကိုဆွစ်ဇာလန် EM microelectronics ကုမ္ပဏီ EM4200 ကြိုးမဲ့ RF ချစ်ပ်အတွင်းတူညီကြသည်,အဆိုပါချစ်ပ်အထုပ်နည်းပညာ advanced,Non-အဆက်အသွယ်ကတ်များဘို့အကောင်းတစ်ဖြေရှင်းချက်များနှင့်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်း application.At အထူး-shaped ကဒ်များလျှောက်လွှာပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်ဦးစားပေးဝန်ဆောင်မှုပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်သင့်လျော်ပေး.
တရုတ်တွင်, အဆိုပါသဟဇာတ chip ကိုရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းမှတ်ပုံတင်များတွင်အသုံးပြုထားသည် 75% စျေးကွက်ပမာဏ.
အဆိုပါသဟဇာတ chip ကိုတစ်ဦးပရင့်ထုတ်ရန်ကတ်များသို့ဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်, အထူကတ်များ, Keychain, လက်ပတ်, လက်ကောက်, ပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ် crystal Epoxy Card ကို, ကွဲပြားခြားနားသော application များနှင့်အလေ့အထများလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သကဲ့သို့.
အဆိုပါသဟဇာတ EM4100 chip ကိုပိုပြီးကျယ်ပြန့်၏လယ်ပြင်တွင်အသုံးပြုသည် ID ကိုကတ်ပရင်တာ print ထုတ်လို့ရတဲ့ကတ်များ နှင့် Access Control.
(EM4100 အစားထိုး EM4200, EM4102, EM4005, EM4105)
အထောက်အထားအသိအမှတ်ပြုမှု, အချိန်နှင့်တက်ရောက်သူစနစ်များ, access ကိုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ, ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင်, ဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းချုပ်, ကော်ပိုရိတ်ကဒ်စနစ်များကို, ကားရပ်ခြံ, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, တိရိစ္ဆာန်ဖော်ထုတ်ခြင်း, ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, ကုန်စည်ဖော်ထုတ်ခြင်း, စက်မှုဇုန်အလိုအလျောက်, တက်ရောက်သူတွေ့ဆုံ, အီလက်ထရောနစ် tags များ, စူပါမားကက်, ဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှု, ပုဂ္ဂိုလ်များစီမံခန့်ခွဲမှု , လုံခြုံရေးစနစ်များ, ဒါကြောင့်အပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်.
ငါ EM4102 Chip ကဒ်နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်, EM4200 Chip ကဒ်နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့
prev: EM4205 Chip ကဒ်, EM4305 Chip ကဒ်, 134.2kHz ကြိမ်နှုန်း Access ကိုတံခါး Card ကို
နောက်တစ်ခု: TK4100 Chip ကဒ်, TK4101 Chip ကဒ်, 125kHz သတ်မှတ်ခြင်း Card ကို